हाम्रो नेपाल मा : HAMRO NEPAL MA: October 2010
तपाई यी हरफहरु पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाई नेपालमा हुनुहुन्न. किनभने माकुने को सरकार ले यो ब्लग लगायत ब्लगस्पट सब डोमेन भएका सबै ब्लगलाइ ब्लक गरेछ... धन्यबाद माकुने र उसको यो निकम्मा कामचलाउ सरकारलाइ, हाम्लाई पनि सेलिब्रेटी बनाएको मा.. माकुने गवर्न्मेंट सक्स.. हाहाहा
Labels: Freedom of Speech, Madhav Kumar Nepal, Nepal Government Blocks Blogs
माकुनेले बुढी सँग दङग पर्दै ढोग खाएको धेरैले मार्क गरेछन. हिजोको पत्रीकाहरुले फ्रोन्ट पेज मा छापेछन. कत्तिले माकुने कमुनिस्ट को नाम मा कलन्क भनेछन. जसले जे भने पनि मलाई चाँही पत्रकार केटीहरुले लोग्नेलाई ढोग्ने दिन आफ्नो कहिले आउला भन्दै दङग परेर हेरेको रमाइलो लाग्यो.
Labels: Feminist Movement in Nepal, Madhav Kumar Nepal
आज माइक्रोबसमा एउटी कुइरेनी को छेउमा परियो. उसको काखमा एउटा सानो घुतुमुने बच्चा र छ. बच्चोले मलाइ देखेर आँ आँ गर्दै हात हल्लायो. कुइरे को बच्चो सानै मा पनि कस्तो कन्फीडेन्ट र छ. धेरै दिन भाथ्यो केटाकेटी को सङ्गत नगरेको. एकछिन बच्चा संग खेलियो. रमाइलो भो. मूड फ्रेश छ आज.
Labels: Playing with babies
जानेबेलामा भएपनि एउटा राम्रो काम भने गर्न भ्याएछ माकुनेले. त्यो पनि ढङ्ग पुगेको छैन कुचो लाउने तरिका. घरमा सधै गायत्री म्यादमले कुचो लाउदी हुन् अनि के ढङ्ग पुग्थ्यो माकुने को. भारत् का महात्मा गान्धीले चर्पी सफा राख्ने जनचेतना फैलाउन आफै अघि सरेर मेस्तर को काम गर्थे. शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ. तर हुनुपर्यो नि साहस. नाटक मात्रै गरेर हुन्छ ?
तस्विर: माइ संसार बाट
Labels: Madhav Kumar Nepal, Political and Social Corruption in Nepal
लु यि हुन तपाईंको भबिस्य बताउन भारत को आन्ध्र प्रदेशबाट आएका ज्योतिषीहरु... बिचरा आफ्नै फुट्पाथ को जीवन छ्... यिनले तपाईंको भविस्यबाणी गर्छन् अरे हाहाहा... ओ मानिस कठैबरा तिम्रो जीवन...
Labels: Miseries of Human Life